Smart mita Vagadziri - China Smart metres Suppliers, Fekitori
Matatu-chikamu mana-waya / matatu-chikamu matatu-waya magetsi mita inotora yakakura-yakasanganiswa redunhu uye inoshandisa yakakwirira-yechokwadi simba yekuyera chip. Yayo yekutakura module yekutaurirana kugona uye kuvimbika zvakare yakasvika padanho rekushandisa rakakura. Iyo inogamuchira digital sampling processing tekinoroji uye SMT maitiro, uye inogadzirwa uye inogadzirwa maererano nemagetsi chaiwo ekushandisa evashandisi vemaindasitiri.
Imwe-chikamu chemagetsi magetsi metres ndeye nyowani yekuyera simba chigadzirwa chakagadziriswa uye chakagadzirwa nekambani yedu maererano nehunyanzvi hwekutarisirwa GB / T17215.321-2008. Ichi chigadzirwa chinoshandisa hombe-dzakabatanidzwa macircuit uye maSMT maitiro, ane mabasa akadai magetsi emagetsi kuyera, kugadzirisa dhata, chaiyo-nguva yekutarisa, uye ruzivo rwekudyidzana.
Matatu-chikamu mana-waya / matatu-chikamu matatu-waya magetsi emagetsi idunhu rakakura-rakasanganiswa, ichishandisa dijimendi sampling yekugadziridza tekinoroji neSMT maitiro, akagadzirwa uye akagadzirwa zvinoenderana nemagetsi chaiwo ekushandisa vashandisi vemaindasitiri. Izvo zvinosangana nezvinodiwa zve GB / T 17215.301-2007 ， DL / T 614-2007 uye DL / T645-2007 .Zvinodiwa zvinogona kuve zvakagadzirirwa zvinoenderana nezvinodiwa zvebasa.